ကုန်ပစ္စည်း Parameters အမည်: 350မိုဘိုင်းဖုန်းအိတ်ထုပ်ပိုး box ကိုပစ္စည်းထုပ်ပိုးဂ kraft စက္ကူအံဆွဲ: 300gsm Kraft စက္ကူမျက်နှာပြင်ကိုင်တွယ် : Matte အလွှာအရောင်: အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းအရွယ်အစား: နမူနာခဲအချိန်စိတ်ကြိုက်:5အလုပ်လုပ်ရက်များ Mass အမိန့်အချိန်: 18-20 အလုပ်လုပ်ရက်များဒီဇိုင်းဖိုင်သည်ငါတို့ဒီဇိုင်နာသည်သင်စစ်ဆေးသောအရာအတွက် AI ဖိုင်လုပ်နိုင်သည်:…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးစိတ်ကြိုက်ခေါက်နိုင်သောကွတ်ကီးများ၊ အံဆွဲစက္ကူသေတ္တာ၊ တောက်ပသောစေးကပ်ခြင်းအသုံးပြုခြင်း။(250ဂ,300ဂ, 350ဂ),အနုပညာစက္ကူ(128ဂ, 157ဂ, 200ဂ, 250ဂ, 300ဂ),မီးခိုးရောင်နောက်ကျောနှင့်အတူ Duplex ဘုတ်အဖွဲ့(250ဂ, 300ဂ, 350ဂ,400ဂ),မီးခိုးရောင်စက္ကူ(250ဂ, 300ဂ, 350ဂ, 400ဂ),စာရွက်စာတန်း(100ဂ, 120ဂ, 150ဂ, 200ဂ, 250ဂ, 300ဂ),မြှောင်းပုံစက္ကူအရောင် Pantone (PMS)…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် 1.Feature: ဖက်ရှင်,အရည်အသွေးမြင့် 2.Material: တာရှည်ခံမီးခိုးရောင်ဘုတ်အဖွဲ့,အနုပညာစက္ကူ. 3.အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက်ကြိုဆို 4.Color ဖြစ်ပါတယ်: မည်သည့်အရောင် 5.Logo ရရှိနိုင်ပါသည်&ဒီဇိုင်း: Customizing သို့မဟုတ်ငါတို့မှို 6.Printing: ဖောင်းကြွ,ပုံနှိပ်ခြင်း,ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ,စသည်တို့ကို 7.Packing: 1polybag အတွက် PCs,10-35pcs in5ပုလွေမြှောင်းပုံပုံး 8Weight: အရွယ်အစားအပေါ်အခြေခံသည် & ပစ္စည်း,အထူဝယ်ယူအင်ဖို 1.Minimum အမိန့်: 1000pcs 2.Sample အချိန် 2-3 အလုပ်လုပ်ရက်. 3.ကြာမြင့်ချိန် 15-25 ရက်အကြာတွင်အမိန့်အတည်ပြုခဲ့သည်,နှင့် QTY 4.Payment General ကို အခြေခံ၍ T / T. အပေါ် မူတည်၍ အခြားငွေပေးချေမှုများကိုလည်းဆွေးနွေးနိုင်သည်. 5.ယူနစ်စျေး FOB ရှန်ဟိုင်း, (ထို့အပြင် ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုပေးသည်, အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး, စျေးကွက်ရှိဇီဇာကြောင်ဆုံးသောစီမံခန့်ခွဲမှုသူဌေးအတွက်အပြည့်စုံဆုံးထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှု, သင်၏ထုတ်ကုန်များသည်အဆင့်မြင့်ဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ဂရုစိုက်မှုရရှိရန်ဖြစ်သည်, ထို့ကြောင့် Ouhai ထုပ်ပိုးခြင်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့အများဆုံးရင်းနှီးသော partner.The အဆုံး,…
စက္ကူထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုပါ,သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း,ချောကလက်,ဝိုင်,အလှကုန်,ရေမွှေး,အဝတ်အထည်များ,လက်ဝတ်ရတနာ,ဆေးရွက်ကြီး,အစားအစာ,နေ့စဉ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ,အီလက်ထရောနစ်,အိမ်များထုတ်ဝေခြင်း,လက်ဆောင်ကစားစရာများ,နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ,အထူးပစ္စည်း,ပြပွဲ,ထုပ်ပိုး,သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း,စသည်တို့. နာမည်: စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောသေးငယ်သည့်ထုပ်ပိုးထားသောလျှောဆပ်ပြာ Kraft စက္ကူအံဆွဲ Box ကိုလက်သုံးပစ္စည်းနှင့်: 300gsm Kraft စက္ကူမျက်နှာပြင်ကိုင်တွယ် : Matte အလွှာအရောင်: အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းအရွယ်အစား: နမူနာခဲအချိန်စိတ်ကြိုက်:5အလုပ်လုပ်ရက်များ Mass အမိန့်အချိန်: 18-20 အလုပ်လုပ်ရက်ဒီဇိုင်းဖိုင်…
လျှော Open Drawer Box အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအတွင်းခံအဝတ်အစား Box စက္ကူခေါက်အဝတ်အထုပ်
ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်, OEM&ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဆယ်နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များအား ODM ၀ န်ဆောင်မှုလျှောလျှောဖွင့်အံဆွဲသေတ္တာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအတွင်းခံအဝတ်အစားသေတ္တာစက္ကူခေါက်အဝတ်အထုပ်အထုပ်ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၁ ။: ဖက်ရှင်,အရည်အသွေးမြင့် 2.Material: တာရှည်ခံမီးခိုးရောင်ဘုတ်အဖွဲ့,အနုပညာစက္ကူ. 3.အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက်ကြိုဆို 4.Color ဖြစ်ပါတယ်:…